Ukukhupha ukungcola kwisinyithi nge-gamma-butyrolactone
ikhayaPortfolioUkukhupha irusi kwisinyithi nge-GBL
Ukukhupha ukungcola kunokuba ngumsebenzi omninzi
Xa intsimbi ingakhuselekanga iba sengozini yokugqwala. Ukukhupha irusi kwisinyithi kunokuba ngumsebenzi onzima nanzima. Ingcebiso yethu kuxa umhlwa ngentsimbi uqalisa ukukhula, kuyacetyiswa ukuba ufumane oku kwangoko. IGamma-butyrolactone inokuthi xa ifakwa kwisigaba sokuqala isebenze kakhulu ekususeni umhlwa ngentsimbi. Xa ulibele kakhulu ukuqala ngokususa irusi kwisinyithi kuya kuba nzima kwaye kungonakalisa isinyithi ngokusisigxina. Oku kunokukubiza imali eninzi ngamanye amaxesha. Ngovuyo ngale ndawo icocekileyo, ukususa inkungu kunye namabala kwisinyithi kulula ukuyisusa. Okokuqala ngokususa umhlwa okusebenzayo, kufuneka ubeke i-gamma-butyrolactone kwisiqwengana sesinyithi, apho umhlwa uqalile ukusasazeka. Yiyeke imizuzu engamashumi amathandathu apho kwaye usule ngendwangu eyomileyo okanye iphepha lokugqobhoza irusi yesinyithi isusiwe. Khumbula ukuba uqinisekisa ukuba akukho zintsalela ze-gamma-butyrolactone esele kwisinyithi. Kuyacetyiswa ukuba uqaphele kakhulu ukuthintela ukuvela kwesinyithi. Ukususa umhlwa kwinqanaba lokuqala kungonga umzamo omkhulu kunye nemali. Ukuba umhlwa ubenomgqomo ixesha elide kwisinyithi, kungenzeka ukuba ukususa umhlwa akukho kude. Ke isinyithi kufuneka yonakaliswe kakhulu. IGamma-butyrolactone yenye yeendlela ezikhuselekileyo zokususa amabala akho alukhuni. Likho:
-Binokusetyenziswa ngendlela efanelekileyo.
-Angoyiki ulusu, gqoka iiglavu (irabha) ngegloves!
Isusa ioyile, i-inki, ipeyinti, i-varnish kunye neebala zeoyile kwindawo egudileyo. I-R22 -Iyingozi ukuba iginyiwe. I-R36-Iyacaphukisa amehlo. I-S39-Nxiba ubuso / ukukhusela iliso. I-S26-ngamehlo: Amehlo ngoko nangoko ahluze ngamanzi amaninzi kwaye afune iingcebiso kwezonyango. I-S45-Kwimeko yengozi okanye ukuba uziva ungahambanga, funa icebiso kunyango ngoko nangoko (ukuba kunokwenzeka bonisa ilebhile.)
Musa ukusebenzisa ngokudibeneyo kunye nezinye iimveliso zokucoca!
Gcina isitya esivalwe ngokuqinileyo kwindawo epholileyo neyomileyo kude nemithombo yokulahla.
Ngokunxulumene ne-biodegradability yeGamma butyrolactone emanzini, sicebisa ukuba ufumane isisombululo esisebenzayo esifutshane sokulungiselela kwangaphambili kwaye usisebenzise. Kwiintsuku ezimbalwa le solvent iya kuguqulelwa kumanzi ixesha elide kangangexesha elide kwaye iyaphulwa ukuze isiphumo sokucoca siphulukane.
Isilumkiso! I-GAMMA BUTYROLACTONE YAYISISEKO KAKHULU kwaye NGOKUGQIBELEYO XA KUDALIWE!